Isikhalazo Sokumiswa kwe-Amazon: Izinto Okufanele Uzenze Ngemuva Kokumiswa Komthengisi we-Amazon
Okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze Ngemuva kokumiswa kwe-akhawunti yomthengisi we-Amazon
I-Amazon yabathengisi abakwi-inthanethi yi-mecca engcwele. Futhi, kuyafana nakumakhasimende. Kunezigaba nemikhiqizo ehlukahlukene kakhulu umuntu angayithenga. Yize, ngenani elikhulayo labathengisi emsamo linikezela ngemikhiqizo emihle, inani lezikhalazo zokumiswa kwe-Amazon nalo lenyukile.
Lokhu kwenzeke ngenxa yokuthi ikhwalithi yemikhiqizo endaweni yesikhulumi yehlile futhi nesibalo samakhasimende angeneme sanda. Ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende e-Amazon athola izinto ezinhle kakhulu ku-intanethi, i-Amazon izama ukuba nabathengisi bekhwalithi. I-Amazon ikwenza lokhu ngokubeka izinqubomgomo ngaphezu kwabathengisi endaweni yesikhulumi. Futhi, uma ingadlalwanga kahle yibo abamisa i-akhawunti yabo. Kuyinto ejwayelekile futhi siyinkampani esiza abantu abaswele.
Yize, uma umusha kulesi sihloko ngizokululeka ukuthi ufunde ngezansi ngaphezulu ngesikhalazo sokumiswa kwe-Amazon, nokuthi sibasiza kanjani abantu abane-akhawunti yomthengisi emisiwe.
Kusho ukuthini ukumiswa kwe-akhawunti ye-Amazon?
Ngenani elikhulayo, kube nezigameko eziningi ngokwengeziwe zokumiswa komthengisi we-Amazon. Ngokufanelekile, kungaba nezimo ezintathu umthengisi we-Amazon angahle adlule kuzo. Lezi izi:
Ukumiswa: Uma i-akhawunti yakho imisiwe lokho kusho ukuthi ungenza Isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon. Lokhu kusho ukuthi udinga ukuza nohlelo lokusebenza.
Kunqatshiwe: Lokhu kusho ukuthi umthengisi wenze isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon kodwa senqatshwa yisiphathimandla. Kulokhu, umuntu kufanele aqhamuke noHlelo Lokusebenza olubukeziwe.
Ukuvinjelwa: Leli phuzu lokungabuyeli emuva. Akunasikhalazo sokumiswa esingakusindisa uma i-akhawunti yakho ivinjelwe.
Ukumiswa kwe-Amazon kungafingqwa kokubili kokuqala. Uma i-akhawunti yakho imisiwe noma isikhalazo sakho sinqatshiwe. Kusho nje ukuthi i-Amazon ifuna ukuthi wenze ushintsho oluthile futhi uthuthukise izinsizakalo zakho.
Kepha, uma uvinjelwe endaweni yesikhulumi empeleni okuyindawo emnyama ngakho-ke akukho ukubuya. Umuntu angacabanga ngokuvula i-akhawunti entsha kepha lokho kuphambene nezinqubomgomo ze-Amazon. Lokhu kusho ukuthi ayikho indlela yangempela yokubuyisa i-akhawunti yakho. Noma, lokhu kwenzeka kuphela kwimisebenzi emibi kakhulu. Ngakho-ke, uma ungazi kule loop maningi amathuba okuthi kungenzeka ungafinyeleli kulelo zinga. Futhi lokho kungalungiswa kusetshenziswa isikhalazo esisebenzayo sokumiswa kwe-Amazon.
Isizathu Esivamile Sokumiswa Kwe-Amazon
Uma siqala ukufunda imigomo nemibandela ye-Amazon kuzothatha isikhathi nokudideka okuningi. I-Amazon okuyiyona yesikhulumi esikhulu kunazo zonke se-ecommerce icela ukulandela imithetho nemithethonqubo eminingi kangaka. Lesi yisizathu sokuthi isibalo sezikhalazo zokumiswa kwe-Amazon ngokuhamba kwesikhathi sikhuphukile. Eqinisweni, besizibonela mathupha ukwanda kwenani labantu abasondela kithi bezofuna ukumiswa isikhalazo e-Amazon. Uma sihamba ngencwadi ye-Amazon lapho-ke kungaba khona izizathu eziningi. Kepha, konke kungahlanganiswa kube kathathu:
Isizathu esivame kakhulu ukwephulwa kwezinqubomgomo i-Amazon ekucela ukuthi uyilandele. Uma ungazange usebenze ngokoqobo kungenzeka ukuthi wephula inqubomgomo.
Ibhizinisi lakho lithatha ukungena ngokujulile. I-Amazon ayifisi ukujabulisa abathengisi abathengisa kabi. Isikhathi esiningi, kunezizathu eziqinile zokuthi kungani lokhu kwenzeka? Futhi uma ukwazi ngakho qiniseka ukuthi uyakulungisa.
Ukuthengisa umkhiqizo ongavunyelwe kungxenyekazi. Lokhu kungenzeka futhi ngemikhiqizo ephula izinqubomgomo ze-IP.
Funda futhi: Izizathu Zokumiswa Kwe-Akhawunti Yomthengisi we-Amazon
Siyithola kanjani indaba yokumiswa kwe-Amazon?
Ngaphandle kokusebenzisa amakhanda ethu lapha nalaphaya, indlela engcono yokwenza lokhu ngokuhlola isaziso esithunyelwe yi-Amazon. Uma i-akhawunti yakho imisiwe okokuqala ngqa kungenzeka ukuthi unganakile. Kepha, i-Amazon iqinisekisa ukuveza iphutha lakho futhi yilapho sizama ukusiza khona.
Ngokudlula kwisaziso esithunyelwe i-Amazon, siqala umsebenzi wethu ukudala i-akhawunti yakho yomthengisi isikhalazo esimisiwe sokumiswa kwe-Amazon.
Ungakuvimbela kanjani ukumiswa kwe-akhawunti yomthengisi we-Amazon?
Ukubhala isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon kuyimpikiswano engadingekile lapho umuntu angavele aqhele ekumisweni. Siyinsizakalo yokudlulisa isikhalazo e-Amazon kepha futhi sinikeza amaklayenti ethu inzuzo yokuvimbela ukumiswa.
Ukwenza i-akhawunti yakho imiswe okwesikhashana bese uyibuyisela kabusha kungabonakala kujwayelekile. Kepha, kwenzekani lapho ulahlekelwa yibhizinisi lakho ngalezo zinsuku ezimbalwa. Eqinisweni, lokhu kungalimaza nokwethembeka kwakho nezinga lomkhiqizo kusistimu. Ngaphandle kwalokho isitolo sakho okwamanje sivaliwe okusho ukuthi awenzi mali.
Sibheka kakhulu imisebenzi yakho epulatifomu futhi sikuqondise. Sizama ukuthi ungabanjwa kunoma yimiphi imisebenzi enobungozi, kungaba ngokwazi noma ngokungazi. Ngithembe, amaklayenti amaningi anomuzwa wokuthi angaphazamisa futhi aqashe umuntu onjengathi. Kepha, njalo akusebenzi ngendlela esifuna ngayo ikakhulukazi uma iklayenti belilokhu liphinda amaphutha afanayo kaninginingi. Senza isiqiniseko sokuthi awunaphutha futhi sigcina ithrekhi ukuze impilo ye-akhawunti yomthengisi igcinwe futhi amaklayenti agweme noma yisiphi isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon.
Silwakha kanjani uhlelo olwenziwe ngokwezifiso lokumiswa kwe-Amazon?
Kunezinto ezimbalwa ezidinga ukwenziwa mathupha. Isibonelo, ukuhlola isaziso esithunyelwe i-Amazon ngemuva kokumiswa. Ukuhlola amamethrikhi omthengisi ukubona ukuthi i-akhawunti yakho ibisebenza kanjani ngalesi sikhathi.
Ukuze senze amathuba ethu abe mahle futhi senze okufanele Uhlelo Lokusebenza (POA), sizama ukucophelela ngangokunokwenzeka. Futhi, sizama nokuxolisa, kuyigama elingukhiye elingaba namandla impela.
Sikwenze lokhu izikhathi eziningi ezihloniphekile. Lapho sesikuqonda konke esikunikiwe, zama ukwenza uhlelo olusebenzisa lezi zinto eziyinhloko njengezithako:
Thina egameni lakho sithatha umthwalo nganoma yikuphi ukulahleka okwenzekile. Kungaba yipulatifomu noma amakhasimende noma kokubili.
Zama ukwenza isithombe lapho sibenza bazizwe ukuthi kuyabonga ukuba nesikhulumi esinjenge-Amazon. Futhi, impela kuyithuba lelo esingeke sithande ukulimosha.
Ungagxeki eminye imikhiqizo yabathengisi noma izinsizakalo zabo. I-Amazon ithatha isikhathi esifanele kepha imisa noma ngubani owephulayo.
Futhi njengoba sathi "ukuxolisa" igama elingukhiye.
Amanye Amathiphu Abalulekile
Lokhu kungabonakala njengokuthopha kodwa ngethembe ukuthi konke kuyiqiniso ngomqondo ohloniphekile. I-Amazon empeleni inikeze ipulatifomu kwabaningi ukuhweba ngokuthembeka. Inika amathuba amaningi kulabo abafisa ukwenza okuhle ngebhizinisi labo. Amandla okuthengisa ngqo kumakhasimende akanye nawe kusuka noma yikuphi kuyinto umuntu ayeyifisela. Futhi manje uma kuyinto engokoqobo esikhundleni sokubonga, abathengisi abaningi bamane bazame ukusizakala ngezinhloso zesikhashana.
Uma-ke sesihlanganise yonke idatha ukwakha isikhalazo esimisiwe sokumiswa kwe-Amazon, asisheshisi. Kubalulekile ukuthi noma yini ethunyelwa ku-Amazon isezingeni eliphakeme kakhulu. Lokhu kungabonakala kungabazisayo kepha iqiniso ukuthi uma uphuthelwa umzamo wakho wokuqala ukubuyiselwa kungathatha isikhathi esiningi.
Ezinye izithako ezibalulekile esizisebenzisayo ukwakha isikhalazo esifanele sokumiswa kwe-Amazon:
Sizama ukukhuluma ngezinqubomgomo kuphela nokuthi yini ilungelo lethu. Akunasizathu sokukhuluma ngamamethrikhi wokusebenza lapho umiswe okwesikhashana. Noma ngabe ukhipha izinombolo ezivuthayo, akusho lutho ikakhulukazi uma ukukhathazeka kuhlukile.
Siyaqinisekisa ukuthi incwadi ethunyelwe yithi ayimide ngokwendalo. Okuqukethwe okude kuthatha isikhathi ukugaya ngakho-ke kufushane futhi kuyakhakhaza kuyindlela ekahle yokubhala isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon.
Esikhundleni sokusebenzisa izigaba ezinde zencazelo, sizama ukuhlela isikhalazo sethu sokumiswa kwe-amazon sisebenzisa amaphuzu nezinombolo. Lokhu kungabonakala njengesivumelwano esincane kepha kwenza okwakho kwe- incwadi yesikhalazo ye-amazon iskena ukuskena kakhulu kuchwepheshe oqokiwe we-Amazon.
Sizama ukugwema noma yiluphi ulwazi olwengeziwe futhi sigxile kuphela enkingeni enikezwe iklayenti. Lokhu akuhambisi ukunakwa okungadingekile kwenye indawo.
Ukuqala kwethu komsebenzi yinkinga esesiseduze. Esikhundleni sokudlala noma yimiphi imidlalo yokusola, siqinisekisa ukuthi i-Amazon iyazi ukuthi siyaluqonda ukoniwa kwethu futhi sizokulungisa ASAP, futhi singaphinde siyiphinde.
Elinye icebo elihle, esivame ukulisebenzisa ukubhala isigaba sesingeniso esichaza konke ngokuyisisekelo. Lokhu kungabonakala kukuncane ngaphandle kokulingana kepha kusebenza njengomlingo. Lezi amathiphu awusizo kakhulu ngenkathi wenza isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon. Futhi, imvamisa kuyifomethi esiyidlalayo ngaphakathi kepha kubalulekile ukuthi wazi ukuthi inkinga esesandleni kuphela ezonquma ukuthi kuzobhekwana kanjani nayo.
Kungani siphakamisa ukuthi abathengisi bahambe ngobungcweti kuSikhalazo Sokumiswa?
Yebo, lokhu kungazwakala kukuxakile kepha imizwa ingaba yisizathu esikhulu sokuthi ukubuyiselwa kwakho kungathatha isikhathi eside. Sihlangana namakhasimende nsuku zonke abesebenza ngokwethembeka endaweni yesikhulumi. Noma kunjalo, i-akhawunti yabo yamiswa ngoba bebengazi noma nje bengasebenzi ngokwanele kulo mnyango.
Eqinisweni, singakutshela ngamakhasimende avele asigwema isaziso se-Amazon ngoba ayezoyeka ukuthengisa omunye wemikhiqizo yawo ngenxa yokubuyekezwa komsebenzisi. Yize ngaphambi kokuthi benze lutho, i-Amazon yamisa i-akhawunti yabo.
Kunabantu abaningi kakhulu emsamo abanikeze isikhathi esiningi ekwakheni ibhizinisi labo. Ukukuthatha konke ngomzuzwana kungaba lukhulu kwabaningi. Futhi, kubalulekile ukuzigcina uqukethe. Futhi, ngaphandle kokuba yithimba lakho lokuqala lokuphendula ngemuva kokumiswa, siyaqinisekisa ukuthi awumiswa ekuqaleni. Thina @ APlus Global Ecommerce sikholwa ngokwethu ukuthi singabalingani namakhasimende ethu ngezikhathi zesidingo. Ibhizinisi labo elichumayo impumelelo yethu.
Izeluleko Zethu Zokugcina zokugwema ukubhala ukumiswa kwe-Amazon
Yebo, siyinsizakalo futhi siyathanda ukuthola ibhizinisi. Kepha, lokhu akusho ukuthi akufanele sizame ukusiza abanye abathengisi be-Amazon. Singaba nemisebenzi ehlukile kepha siyayiqonda inkinga yakho. Futhi ngenkathi kunezinsizakalo eziningi laphaya wonke umuntu ucabanga ngokunikeza ithuba lokuzama ukuzenzela isikhalazo. Kunezinto eziningi ezingashiwo kodwa ngaso sonke isikhathi kungcono ukugwema noma ikuphi ukumiswa. Ukuze wenze kanjalo kunezinto ezimbalwa okudingeka uzigcine engqondweni.
Gwema ukuthengisa noma yiluphi uhlobo lwezinto ezivinjelwe.
Baningi abathengisi okungenzeka ukuthi benza kanjalo kepha lokhu akusho ukuthi kufanele. I-Amazon iyala ngqo abathengisi bayo ngalokhu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ulalele ngokucophelela uma ufisa ukugwema isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon.
Zama ukugwema ukuthengisa
imikhiqizo engabonakala ingenangqondo kuwe. Uma umkhiqizo owuthengisayo ubukeka njengokulingisa okuthile noma ukusebenza kwawo, zama nje ukwazi izimpande zalowo mkhiqizo. Kunenqwaba yabantu abamisa ama-akhawunti abo ngenxa yezinqubomgomo zokwephulwa kwe-IP. Lesi ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani abathengisi abaningi bemisa i-akhawunti yabo.
Yebo ukuqhuba ibhizinisi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi uthengisa umkhiqizo ongaphezu kowodwa. Lokhu kumane kusho ukuthi uma uzwa noma yini engajwayelekile ngomkhiqizo owuthengisayo futhi ufisa ukwenza kanjalo ukuthola ukubonisana kuyinto engcono kakhulu ongayenza.
Gwema ukukhwabanisa izibuyekezo zakho.
Ukubuyekezwa ku-Amazon kuyinkomba esemqoka yekhwalithi yomkhiqizo wakho. I-Amazon ayifuni ukuthi uzame ukuyishintsha nganoma iyiphi indlela. Kubalulekile ukuthi uthathe lezo zibuyekezo ngokwakhayo bese uqala ukwenza ngcono insiza yakho ngokumane uzilandele. Ukubuyekezwa kwamakhasimende kuyindawo yokuqala lapho umuntu angafuna khona ukugxekwa nokunconywa okuthembekile. Futhi uma wehluleka ukwenza kanjalo-ke kungenzeka ukuthi wamukela isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon.
Thembeka ngezincazelo zakho.
Abathengisi abaningi bachaza umkhiqizo wabo ngokuhlukile ngenkathi umkhiqizo uqobo ungeyona leyo ncazelo. Uma i-Amazon ithola izikhalazo eziningi kakhulu maqondana nalokho kungenzeka ukuthi wamukela i Isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon.
Ukuthola isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon kungaba yisimo esibi kunazo zonke umuntu angabhekana naso. Noma, uma ungakwazi ukubhekana nalesi simo ungasicela ukuthi sikusekele. Mayelana neminyaka yobudala, sisemncane kodwa ngokwesipiliyoni, sinabachwepheshe abanolwazi oluningi lokumiswa kokumiswa kwe-Amazon. Abasebenzi bethu banokuhlangenwe nakho okujulile ku-niche futhi banolwazi lweminyaka emkhakheni. Ngaphandle kwalokho I-Aplus Global Ecommerce inikeza okunye amasevisi njengokuvinjelwa kokumiswa, ukuhlolwa kwezempilo kwe-akhawunti, ukuqiniswa kokuthengisa, njll. Ngakho-ke, uma ufuna insizakalo yobungcweti ukukuxhasa lapho-ke singaba usizo. Siyethemba ukuthi lokhu kungenzeka kube usizo kuwe. Futhi, ngiyabonga ngokuyifunda kuze kube sekupheleni.
Singathanda ukuzwa kuwe!
← Ikhasi langaphambilini
Ikhasi Elilandelayo →